Rohy fampidinana mivantana an'ny iOS 7 ho an'ny fitaovana rehetra | Vaovao IPhone
Azo alaina amin'ny fomba ofisialy izao ny iOS 7, tsy misy kaonty mpamorona na toy izany. Izay mpampiasa iOS rehetra manana fitaovana mifanaraka aminy dia afaka manavao ny fitaovany. Toy ny mitranga hatrany rehefa avoaka ny fanavaozana, ary indrindra raha momba ny kinova iOS vaovao, dia tototry ny mpizara, mandany fotoana ny iTunes hamantarana fa misy fanavaozana vaovao, ary ny fanavaozana amin'ny alàlan'ny OTA dia tsy mandeha tsara. Manana safidy roa ianao avy eo: andraso ny ora handalovany ary hihena ny lavaky ny mpampiasa mifandraika amin'ny lohamilin'i Apple, na andramo ary andramo indray mandra-pahatonganao ny fanavaozana alaina raha tsy misy ny tsy fahombiazan'ny fifandraisana. Mba hanamorana ny raharaha dia manolotra anao ny rohy fampidinana mivantana ny kinova iOS ho an'ny fitaovana rehetra izahay.
iPad (WiFi 4)
Apple rohy ny rohy fampidinana, avy amin'ny mpizara azy manokana, ka mety hanana olana ianao mandritra ny ora voalohany. Tsotra toy ny fikitihana ny rohy mandra-pahatapitry ny fisintomana tsy misy olana. Milaza amintsika ny traikefa fa afaka ora vitsivitsy dia hitombo ny toe-javatra ary handeha araka ny tokony ho izy ny zava-drehetra.
Voamarinao ve ny anay torolàlana hanavaozana tsara ny iOS 7? Raha mbola tsy vitanao io, Manoro hevitra anao aho hijery Voalohany indrindra, hialana amin'ny lesoka mety hitranga izany ary hiantoka fa tsy ho very ny angona manan-danja mandritra ny fizotrany.
Fanazavana fanampiny - Vonona ny hanavao ny iOS 7? Izay rehetra tokony ho fantatrao taloha.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » iOS » iOS 7 » Rohy fampidinana mivantana IOS 7 ho an'ny fitaovana rehetra
Fantatrao ve raha ny GM no mitovy amin'ny kinova navoaka androany? Ary raha eny, mendrika ny sintonina ve ny kinova navoaka androany ary apetaho?
Io "fananganana" io ihany, ka tsy maintsy mitovy. Tsy mijanona amin'ny GM velively aho, mieritreritra aho fa tsy misy daty famaranana io, fa raha sanatria, aleoko manavao.
Misaotra! Tonga any aminy aho. Raha vao sintonina, iza no tsara ... manavao sa mamerina?
Mamerina foana aho
manana ny GM raha toa ka tsy manavao dia omeko mba hamerenana amin'ny laoniny, (efa nanao kopia nomaniny ho solon'izay) ary avy eo dia ampiasaiko ny backup mba hamerenako ny data-ko, mety ve ny ataoko? Na raha mampihatra ny kopian'ny nomaniko aho, dia mitoetra ao amin'ny kinova GM toy ny taloha ihany? Misaotra
Raha mamerina ianao dia hapetraka ilay vaovao, saingy mety tsy maintsy averinao amin'ny laoniny aloha ny fikirana sy ny atiny.
Ataoko dieny izao avy amin'ny iTunes dia averiko (mitazona alt hiditra amin'ny ios7 .ipsw) ary rehefa afaka minitra roa dia mangataka ahy izy handamina ilay fitaovana, na amin'ny maha iPhone vaovao azy, na hamerina hamerina. raha ny amiko dia nomeko ny hamerenana amin'ny laoniny ny kopian'ny iTunes. Manantena aho fa tamin'ity fomba ity dia tsy nihemotra aho, ny tiako holazaina dia tsy fantatro raha toa ka ao anaty backup ihany ny fisie sy ny setting-ko, na koa misy ilay kinova ios7 izay nananako tamin'ny fotoana nanaovako ilay kopia , izay ny GM.
Tsia, tsy izany, mangina
TaniaBL dia hoy izy:
Tsy mamela ny hiditra ny pejy fisintomana izy io fa mametraka lesoka rehefa mamoaka!
Mamaly an'i TaniaBL
Misintona tsy misy olana aho izao
Albe dia hoy izy:
ipad mini GSM dia manome hadisoana nanandrana roa na telo hafa aho ary tsy nitranga izany ... hijerena raha afaka manamboatra azy azafady
Valio i Albe
Mamaly aho, efa miasa aho, ho tafiditra daholo isika ...
Ataovy ao an-tsaina fa rohy Apple izy ireo, izany hoe mety tsy hahomby koa izy ireo. Mora kokoa ny misintona azy ireo eto.
Ampidiriko izao dieny izao
Nisy nahavita nametraka iPad2 ve? Miadana ve sa tsara?
Mametraka amin'ny iPad 2 aho, hamorona andian-dahatsoratra ao amin'ny iPad News ho an'ireo izay tsy manapa-kevitra afaka mandray fanapahan-kevitra.
Ivan Mg dia hoy izy:
Azafady, inona ny .ipsw an'ny 4GB iPhone 32? Ilay milaza ny GSM na GSM Rev
Valiny tamin'i Ivan Mg
Aza milaza daty? ity ny vercion ny andro 10/09/2013 ?? sa androany 18 ??
Valio amin'i XD
Lazainy amiko fa tsy mifanaraka ny fisie firmware ..?
Hamarino raha nisintona tsara izy satria matetika io no mahatonga ny tsy fahombiazana
Toa fisintomana feno izany fa mbola nanana 700 Mb sisa
Victor polanco dia hoy izy:
ENY ahy ve ity A1430 amin'ny iPad (taranaka faha-3) Wi-Fi + Cellular, iza no alaiko? fiarahabana
Valiny tamin'i Victor Polanco
Jereo ity: https://www.actualidadiphone.com/como-identificar-el-modelo-de-tu-iphone-e-ipad/
Ok namako eny, ny fampahalalana nanampy ahy iPad ko 3G GSM ary avy any Mexico izany, misy olana ve amin'izany?
Iza amin'ireo roa no nofidiko? Mba miangavy re!
Inona no fiafaran'ny famoahana pejy, isa ary toy izany ...?
Ireo fitaovana novidina ihany manomboka izao ... Mamaky daty aho nefa tsy tadidiko ...
Mody misintona ary rehefa mila 500mb eo ho eo dia toa efa vita nefa tsy feno ary iTunes milaza ny lesoka fa tsy mifanaraka ny firmware dia ho potika ny zava-drehetra heveriko fa
Heveriko fa tsy maintsy miandry isika rahampitso mba tsy hahomby be ...
Betsaka ny olona manandrana miditra amin'ilay tranonkala iray ihany ary tsy Espana ihany isika fa firenena hafa an-jatony ... Efa ho tapitra ny bara fisintomana ho an'ny iTunes.
khunkiller dia hoy izy:
Toa mitovy amin'ny GM izy io, farafaharatsiny izy io dia mitovy amin'ny bytes ary raha nanao fanovana izy ireo dia niova ny sanda
Mamaly an'i khunkiller
Manana ny modely iphone 5 A1429 miaraka amin'ny GM aho ary te-hanavao ny kinova ofisialy na dia mitovy aza. Inona ny rohy tokony alaiko? GSM SA CDMA? Misaotra anao
Efa nanavao aho fa ny pc-ko tsy manaiky ny ipad4 ahy koa tsy mampiditra ny appstore amin'ny idevice ary efa mifandray amin'ny wifi
Efa nakariko azy io ... ary ankehitriny ahoana no fametrahana azy?
Mitovy amin'ny kinova ofisialy ve ny kinova GM? Ahoana no ahafantarako raha manana ny kinova ofisialy nohavaozina aho fa tsy ny GM?
Raha nametraka tamina fomba mahazatra ianao, avy amin'ny iTunes dia azonao ilay mahazatra.
Misy izao ny iOS 7